(L) စိတ်ဓာတ်ကျ? သင်၏ "ရှာဖွေနေသည့်" စနစ်သည်အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။ အာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင် Jaak Panksepp (၂၀၁၃) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn နှင့်စကားလက်ဆုံပြောဆိုခြင်း
(L) စိတ်ဓာတ်ကျ? သင်၏“ ရှာဖွေခြင်း” စနစ်သည်အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။ အာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင် Jaak Panksepp (၂၀၁၃) နှင့်စကားစမြည်ပြောဆိုခြင်း
LINK - Posted: 07/18/2013
“ အကျိုးသက်ရောက်စေသည့်အာရုံကြောသိပ္ပံ” ဟူသောဝေါဟာရကိုတီထွင်ခဲ့သူ Jaak Panksepp သည်စိတ်ဓာတ်ရေးရာပြintoနာများကိုစိတ်ကျေနပ်မှုမှသည်အပျော်ကစားခြင်းအထိထိုးဖောက်ထိုးထွင်း။ ထိုးထွင်းသိမြင်သည်။ အဘယ်အရာကသူ့ကိုအစွန်းရောက်စေသနည်း။ ပထမ ဦး စွာသူသည်တိရိစ္ဆာန်စိတ်ခံစားမှုကိုလေ့လာခြင်းနှင့်တိရိစ္ဆာန်များသည်လူသားများခံစားခဲ့ရသကဲ့သို့ခံစားချက်များကိုတွေ့ကြုံခံစားသည်ဟူသောသူ၏အချက်အလက်များပံ့ပိုးထားသည့်အခိုင်အမာပြောဆိုခြင်း။ ဦး နှောက်၏လျှပ်စစ်လှုံ့ဆော်မှုကို အသုံးပြု၍ ၎င်းကို Panksepp ကပြသခဲ့သည် အားလုံးနို့တိုက်သတ္တဝါများတူညီတဲ့အခြေခံစိတ်ခံစားမှုသည့်စနစ်ရှိသည်: ဆိုလိုသည်မှာကုန်ကြမ်းစိတ်လှုပ်ရှားမှု၏ခံစားချက်များကိုဆက်စပ်လျက်ရှိသောအာရုံကြောကွန်ရက်များအခြေခံနှင့်နှိုးဆော်ခြင်းတဲ့အခါမှာအပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘောတုံ့ပြန်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Panksepp ရှိပါတယ် ကြွက်များကသူတို့ကိုရယ်မောရန်ပြောလိုက်သည်။ ; အခြားမျိုးစိတ်များတွင်သူသည်ခွဲထုတ်ခြင်းဒုက္ခကိုခေါ်ဆိုသည့်အရာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျယ်ပြန့်သောစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ယနေ့ခေတ်အာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်များသည်တိရိစ္ဆာန်များ၏စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဘဝကိုယေဘုယျအားဖြင့်စဉ်းစားရန်မနှောင့်ယှက်ပါ။ သို့သော်ပန်ကက်စ်ပဟေelိအဆိုအရ“ တိရစ္ဆာန်များတွင်စိတ်ခံစားချက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသောစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာစနစ်များရှိကြသည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်ကဤအချက်ကိုအသိအမှတ်ပြုရန်ခဲယဉ်းသည်။ ”
ဒုတိယအချက် - Panksepp သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခံစားချက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအကြောင်းအရာများကိုကြည့်သည်။ ၎င်းတို့သည် ဦး နှောက်အတွင်းရှိပင်မဆိုင်ရာပင်ကိုယ်မူလကွန်ရက်များဖြစ်သည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်အများစုကသူဟာပါရီ (ငါသင်ကြားသည့်နေရာ) နှင့်ဝါရှင်တန် (သူသင်ပေးသည့်နေရာ) အကြားကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းစကားပြောမှုကိုလက္ခဏာများကိုသာကြည့်။ ရင်ဖွင့်ခဲ့သည်။ "သူတို့ကအပြုအမူတွေပါ။ သူတို့ကစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်ရှုမြင်ပြီး၊ ဦး နှောက်စနစ်ကိုမဟုတ်ဘဲကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရခန္ဓာကိုယ်အားနှိုးဆွမှုများကိုမှတ်မိသောအစောပိုင်းစိတ်ပညာရှင်ဝီလျံဂျိမ်းစ်၏အစဉ်အလာကိုလိုက်နာသည်။ Panksepp ၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုနယ်ပယ်အတွက်အဓိကပံ့ပိုးမှုများသည်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လက်ခံထားသောအချက်ဖြစ်သော်လည်းအထူးသဖြင့်စိတ်ကျဝေဒနာကဲ့သို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများအတွက်လူနာများကိုကုသပေးသောစိတ်ရောဂါကုသသူများက၎င်းသည်သူသည်ဤအမူအကျင့်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များနှင့်ကွဲလွဲနေသည်
Panksepp ၏အဓိကပံ့ပိုးမှုတစ်ခုမှာသူ၏အမြင်တွင်လူသားကိုမောင်းနှင်သည့်ရှေးဟောင်းဗီဇ (၇) ခုကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း (သို့)“ အဓိကဖြစ်စဉ်၏အကျိုးသက်ရောက်စေသည့်စနစ်များ” အမည်၊ ရှာခြင်း၊ ဒေါသ၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ PANIC-GRIEF၊ မိခင်စောင့်ရှောက်မှု၊ နှစ်သက်မှုနှင့်တပ်မက်ခြင်းနှင့်ကစားခြင်း။ Darwinian neuroevolutionist တစ်ယောက်အနေနဲ့ Panksepp ကဒီဗီဇအတိုင်းဟာ ဦး နှောက်ရဲ့ရှေးဟောင်းဒေသတွေမှာမြှုပ်နှံထားတယ်လို့ခံယူထားတယ်။ ၎င်းတို့သည်“ အခြေခံအဆင့်၌ ဦး နှောက်အာရုံကြောစနစ်အတွင်းသို့တည်ဆောက်ခြင်း” (ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အားလုံးကိုသူရှင်းပြသည်) ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အမှတ်တရများဖြစ်သည်။ အဓိကအချက်မှာစိတ်လှုပ်ရှားမှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ "သူတို့ကတိရစ္ဆာန်တွေကိုရှင်သန်ရပ်တည်ရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုအလိုအလျောက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်စေတယ်။ "
နောက်ထပ်အခြေခံကျကျထိုးထွင်းသိမြင်မှု - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစနစ်ခုနစ်ခုအနက်မှအရေးအပါဆုံးဖြစ်သောရှာဖွေခြင်း - မျှော်လင့်ခြင်းစနစ်သည်စိတ်ကျခြင်းကိုနားလည်ရန်အဓိကအကြောင်းအရင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ရှာဖွေနေသည့်စနစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရှာဖွေရန်လှုံ့ဆော်ပေးသောစနစ်ဖြစ်သည်။ အရသာရှိသောအခွံမာသီးများတည်ရှိရာနေရာသို့မဟုတ်အင်တာနက်ချိန်းတွေ့ခြင်းဝန်ဆောင်မှုအသစ်တစ်ခုပေါ်ရှိ link တစ်ခုဖြစ်သည့်ကျွန်ုပ်တို့အားရှင်သန်ရန်အထောက်အကူဖြစ်စေမည့်သတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရှာဖွေရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ၎င်းသည်တိရစ္ဆာန်များအားကမ္ဘာပေါ်တွင်ထွက်ခွာသွားရန်နှင့်လိုအပ်သောအရင်းအမြစ်များကိုစိတ်အားထက်သန်စွာရှာဖွေရန်ခွင့်ပြုသည်။ Dopamine-energized ဤ mesolimbic ရှာဖွေခြင်းစနစ်သည် ventral tegmental (ရိယာ (VTA) မှပေါ်ပေါက်လာသောအစာရှာဖွေခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်း၊ စုံစမ်းခြင်း၊ သိချင်စိတ်၊ ကြွက် (သို့မဟုတ်လူသား) သည်၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစူးစမ်းလေ့လာတိုင်း Dopamine ကိုမီးလောင်စေသည်။ Panksepp က“ ကျွန်တော်ဒီတိရစ္ဆာန်ကိုကြည့်ပြီး၎င်းင်း၏ရှာဖွေခြင်းစနစ်ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်ငါပြောနေတာကိုပြောနိုင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကစူးစမ်းရှာဖွေနေတာပဲ။
သငျသညျနိုးထအဆိုပါမိနစ်, ထိုသူတို့ကိုရှာ system ကိုဂီယာအတွက်ဖြစ်ပါသည်: ဘယ်မှာငါ၏အဆဲလ်ဖုန်းအပေါ်သွားဘာဖြစ်ပါသည်, အဘယ်မှာငါရှာတှေ့နိုငျရှိရာကော်ဖီဖြစ်ပါသည်။
အမှန်မှာ၊ Panksepp အတွက်၊ ဤရှာဖွေခြင်းစနစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စဉ်ဆက်မပြတ်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ထုတ်ခြင်းမှ (သိသာထင်ရှားသောဆက်သွယ်မှုများအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရှာဖွေခြင်း) မှအလွန်အကျွံစွဲလမ်းနေသည့်စွဲလမ်းမှုအားလုံးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်။ "ပြင်ဆင်မှုအသစ်တစ်ခုအတွက်အပျော်စီးနေတဲ့ကိုကင်းစွဲလမ်းသူကိုစစ်ဆေးပါ။ ဒါမှမဟုတ်တစ်ယောက်ယောက်ကအင်တာနက်စွဲနေတယ်၊ ​​Google search တစ်ခုကနေနောက်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ Dopamine သည်လူကိုသေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်နေပြီးလူကိုအမြဲတမ်းသတိထားစောင့်ကြည့်နေစေသည်။
ရှာဖွေခြင်း၏ဆန့်ကျင်ဘက်: စိတ်ကျရောဂါ။ နူးညံ့သိမ်မွေ့သော၊ သငျသညျဆက်လက်ရှင်သန်ရန်ပတ်ဝန်းကျင်ရှာဖွေရန်မှုတ်သွင်းနေကြသည်မဟုတ်။ ရှာဖွေနေသည့်စနစ်ပိတ်သွားပြီ ဒါဟာအလိုလိုလှိမ့်နှင့်အသေကောင်ကစားရန်ပိုကောင်းပုံရသည်။ “ အကယ်၍ မင်းကရှာဖွေနေတဲ့စနစ်ကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်ရင်” Panksepp ကမှတ်ချက်ချသည်။ မင်းရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘ ၀ ဟာအရမ်းကိုစိတ်ပျက်အားငယ်သွားတယ်။ မင်းပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
Panksepp သည်အလွန်ပွင့်လင်း။ ချစ်ခင်ရသူ၊ ဖုန်းပြောသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးနှုတ်ဖြင့်ပြောသောနှုတ်ဖြင့်ပြောသောသူဖြစ်ပြီး၊ သူ၏စာပေများနှင့်အင်တာဗျူးများတွင်သူသည်ကြင်ဖော်မဲ့မိဘတစ် ဦး အနေဖြင့်နှစ်ပေါင်းများစွာကြီးပြင်းခဲ့သည့်အသက်ဆယ့်ခြောက်နှစ်အရွယ်သမီးငယ်တီနာကွယ်လွန်သောအခါ တစ်ဝမ်းနည်းဖွယ်ကားတစ်စီးမတော်တဆမှု။ သူ့ကိုယ်ပိုင်ရှာဖွေမှုကိုပြန်သွားနိုင်ဖို့နှင့်သူ၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာသိပ္ပံနည်းကျသိလိုစိတ်ကသူ့ဇနီးနှင့်သူငယ်ချင်းများ၏ထောက်ပံ့မှုဖြစ်ကြောင်းသူကပြောပြသည်။
စိတ်ကျရောဂါအတွက်ဤရှာဖွေခြင်းကိုရပ်တန့်ခြင်းသည်လူသားတို့၏အခြေခံပင်ကိုယ်ဗီဇကိုချိုးဖောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏သဘာဝတုန့်ပြန်မှုဖြစ်သည်။ ဆုံးရှုံးမှုသည်ခွဲခွာခြင်းကိုရှေးခေတ် ဦး နှောက်၏ယန္တရားများအားလှုံ့ဆော်ပေးလိမ့်မည်။ ကွဲအက်ခြင်း၊ ကွာရှင်းခြင်း၊ အလုပ်ပြုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်သေခြင်း - အထီးကျန်ခြင်းသို့မဟုတ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာပျောက်ဆုံးခြင်းဟုယူဆခြင်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပင်ကိုယ်စနစ်ဖြစ်သော PANIC-Grief System - ဆုံးရှုံးခြင်းသို့မဟုတ်လူမှုရေးပြdisနာများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အဆိုပါစိုးရိမ်ထိတ်လန်-ဝမျးနညျးပူဆှေး System ကိုဂီယာအတွက်သတ်မှတ်တခါ, အရှာအံ့သောငှါစနစ်မရှိတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Panksepp သည်စိတ်ကျရောဂါကုသမှုနည်းလမ်းအသစ်များကိုတီထွင်ရန် ဦး နှောက်၏စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာစနစ်များကိုထိန်းညှိခြင်းဖြင့်လုပ်ဆောင်သည်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူသူ၌စီမံကိန်းနှစ်ခုပြုလုပ်နေသည်။ တစ်ခုမှာရှာဖွေခြင်းစနစ်၏တိုက်ရိုက် Deep Brain Stimulation (DBS) ပါ ၀ င်သည်။ သူကကျွန်တော့်ကိုသတိပြုမိသည့်အတိုင်းပထမစမ်းသပ်မှုတွင်ဂျာမနီရှိလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်စိတ်ဓာတ်ကျကုသမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၇ ယောက်၏သိသာထင်ရှားသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုတွေ့မြင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုတစ်ခုအနေဖြင့်စိတ်ကျရောဂါဆန့်ကျင်သူ၊ ကုဒ်နံပါတ်ဖြစ်သော GLX-13 ဟုခေါ်သည့်မော်လီကျူးသည်“ လူမှုရေးရွှင်လန်းမှု” ကိုသက်သာစေသည်။ စီမံကိန်းနှစ်ခုစလုံးသည်အလားတူမဟာဗျူဟာကိုထင်ဟပ်ပြသသည် -“ ရှာဖွေနေသည့်စနစ်ကိုဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၏ခံစားချက်ကိုတိုက်ရိုက်လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်”
Panksepp တွေ့ရှိခဲ့သောစိတ်ကျရောဂါကုသမှု၏နောက်ထပ်အားကောင်းသောနည်းလမ်းတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့အားအံ့အားသင့်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကစားသည် Panksepp ၏နောက်ဆုံးသုတေသနမှာ PLAY သည်အပန်းဖြေစရာတစ်ခုသာမကလူသား၏ပင်ကိုယ်ဗီဇ (၇) ခုထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ PLAY သည်လူသားများနှင့်အခြားတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ခင်မင်ရင်းနှီးမှုရှိစေရန်နှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းများကိုလေ့လာရန်နှင့်မဖြစ်နိုင်သည့်အရာနှင့်မလုပ်နိုင်သည့်နယ်နိမိတ်များကိုစစ်ဆေးစဉ်အရေးကြီးသည်။ Play သည် Neo-Cortex ကဲ့သို့သောမြင့်မားသော ဦး နှောက်ဒေသများ၏လူမှုရေးကိုထောက်ခံသည့်ပရိုဂရမ်းမင်းကိုအထောက်အကူပြုသည့်အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် PLAY သည်“ အခြားသူများနှင့်အပြုသဘောဆောင်သောဆက်ဆံမှုကိုခွင့်ပြုသည့်အရာ” ဖြစ်သည်။ "ဒါဟာအစအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုတစ်ခုပပျောက်စေနိုင်ပါတယ်။ ကစားရန်ကြွယ်ဝသောတိရစ္ဆာန်များသည်စိတ်ဓာတ်ကျမှုနည်းသည်။ PLAY သည် ဦး နှောက်၏စိတ်အားထက်သန်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ ရှာဖွေနေသည့်စနစ်နှင့် PLAY စနစ်သည်အကတစ်ခုအဖြစ်အတူတကွအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ”
စိတ်ကျရောဂါအတွက်အကောင်းဆုံးကုထုံးမှာအနည်းဆုံး၎င်း၏ပျော့ပျောင်းသောပုံစံဖြင့်လူတို့အားထပ်မံကစားရန်တွန်းအားပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဦး နှောက်စနစ်များစွာကိုအားဖြည့်ပေးနိုင်သည့်ကာယလှုပ်ရှားမှုများစွာရှိသည်။ ”